Nyika yave kusvika mukubvumirana pamusoro pekushandiswazve kwePet preform
Chinangwa chePET kutenderera dhizaini dhizaini (chiyero) ndechekukurudzira preform vagadziri, mapurosesa, uye vashandisi vePET mabhodhoro kutora mamwe eaya marongero mukufunga panguva yekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva, nokudaro zvichiita kuti kuve nekusimudzira kwekutenderera kwePET. Iko kutenderera kwemuviri inzira yekugadzirisa nekudzora marara ekugadzira zvigadzirwa zvitsva pasina kushandura chimiro chemakemikari echinhu chiri kurapwa. Huru hunhu hwePET bhodhoro rekushandura dhizaini dhizaini inosanganisira kudzivirira kushandiswa kwezvinhu uye zvinoriumba pamabhodhoro ePET zvinokanganisa maitiro ekudzokorora kwePET uye kudzikisira hunhu hwePET yakadzokororwa, uye kudzikisa huwandu hwenhengo dzisiri dzemhuka kuvandudza kugadzirisa nekugadzirisa mashandiro .
Parizvino, nyika irikuumba chibvumirano pamusoro pekugadzirwa kwechinwiwa Pet bhodhoro preform, ndiko kuti, kubviswa kwePV zvinhu, sekugona kwazvinoita kushandisa yakajeka isina kuchena kana yakajeka girazi bvudzi bhodhoro, bhodhoro cap ine huwandu hweasinga pfuure. 1 gramu / cubic sentimita isina huremu repurasitiki, senge HDPE. Asi pane misiyano mune ruzivo rwekutsanangurwa uye nemabatirwo ainoitwa.
South Korea yaifanirwa kurasa mabhodhoro ayo ePET mushure mekunge China yavarambidza mukupera kwa2017. Naizvozvo, South Korea yakaraira kuti muna 2020, South Korea icharega kuburitsa mabhodhoro emuvara wePET uye ichichinjira kune yakajeka dhizaina dhizaini, asi imwe chete mabhodhoro edoro. Bazi rezvemamiriro ekumaodzanyemba kweKorea rakasaina chibvumirano chekuzvidira nemakambani gumi nemapfumbamwe, mune izvo zvinhu zvePVC zvicharambidzwa uye chero zvigadzirwa zvinotyora mitemo zvichaitwa pachena. Zviremera zvekuTaiwan zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza zvakarambidza kushandiswa kwemavara ePVC pamabhodhoro ezvinwiwa kutanga kwaNdira 1, 2008, kana mutengo wekuubata waizopeta.
Kusiyana nezvibvumirano "zvekuzvidira" muSouth Korea nemitemo inosungirwa muTaiwan, Japan neEurope ndiyo PET bhodhoro rekushandura dhizaini dhizaini inosimudzirwa nemasangano akakodzera. Europe neEuropean plastic recycling association (PRE), European Union yemvura yakabhoderedzwa (EFBW), European plastiki kutenderera uye kumutsirazve tishu yemasangano (EPRO), uye European mubatanidzwa wezvisiri zvinwiwa zvinodhaka (UNESDA) ina sangano reEuropean rakagadza EPBP PET bhodhoro chikuva (European) chakatangisa iyo European PET bhodhoro dhizaini dhizaini, uye bvuma kuongorora zvigadzirwa zvitsva uye hunyanzvi hwetekinoroji, kuiswa kwezvigadzirwa zvitsva uye tekinoroji kuve nechokwadi mune ramangwana kwete iro remuviri kutenderera maitiro ePET bhodhoro preform fomu block.
Post nguva: Jan-12-2020
Iyo mhepo compressor yeShanganga Nyukireya Simba chirimwa - Hongyanhe n ...
Musi waAugust 14, 2019, Pasi pechapupu chakabatana cheZVA International Nuclear Engineering Co., Ltd. uye Hongyanhe Nuclear Power Plant Project Dhipatimendi, Nanjing Shangair akabudirira kupfuudza kuendesa kwekutsigira air compressors yezvikamu 5 ne 6. Kubva kuhwina bhidha. muna 2017, zvakawanda t ...
Nanjing Shangai akahwina muChina China Dhizaini Dhizaini
Akangwara symmetric akaenzana PET bhodhoro ichivhuvhuta compressor yakagadzirirwa uye yakagadzirwa naNanjing Shangai ndeye yakakwira mashandiro emhepo compressor chigadzirwa. Iine kugadzikana kwayo kwakanyanya uye kuchengetedza simba, inomira kunze uye yakunda iyo China Industrial Design Award.Mumakwikwi nemakumi ezviuru ...
Chinangwa chePET kutenderera dhizaini dhizaini (chiyero) ndechekukurudzira preform vagadziri, mapurosesa, uye vashandisi vePET mabhodhoro kutora mamwe eaya marongero mukufunga panguva yekuvandudzwa kwezvigadzirwa zvitsva, nokudaro zvichiita kuti kuve nekusimudzira kwekutenderera kwePET. Iyo yepanyama c ...